Vaovao - Prospect ny fanasana plastika sy fitaovana fanodinana
Tamin'ny volana jolay 2017, ny minisiteran'ny fiarovana ny tontolo iainana teo aloha dia nanitsy sy nanao lisitra karazana "fako vahiny 24" anisany ny plastika sy ny taratasy fako ao anaty katalaogin'ny fanafarana fako maloto, ary nampihatra ny fandrarana ny fanafarana ireo "fako vahiny" ireo tamin'ny volana desambra 31, 2017. Taorian'ny herintaona nanamasinana sy nampiharana ny taona 2018, dia nitotongana be ny habetsaky ny fako avy any ivelany plastika any Shina, izay nitarika ny fipoahan'ny olan'ny fako koa tany Eropa, Amerika, Amerika Latina, Azia ary Afrika.
Noho ny fampiharana ny politika toy izany dia mihabe ny elanelan'ny fitsaboana ny fako any amin'ny firenena maro. Firenena maro no tsy maintsy miatrika ny olana amin'ny fanary ny fako plastika sy ny fako hafa. Taloha izy ireo dia azo afangaroina sy aondrana any Chine, saingy izao dia ao an-trano ihany no azo levonina.
Noho izany, ny fangatahana fanadiovana plastika sy fitaovana fanodinana entana any amin'ny firenena maro dia mitombo haingana, ao anatin'izany ny fanorotoroana, fanadiovana, fanasoketana, fanangonam-bolo ary fitaovana plastika hafa, izay hitondra vanim-potoana mandroso sy vanim-potoana lehibe. Miaraka amin'ny fanamafisana ny fandraràn'ny fako vahiny any Shina sy ny fanamafisana ny fanentanana momba ny fitsaboana fako any amin'ny firenena isan-karazany, ny indostrian'ny fanodinana entana dia azo antoka fa hitombo ao anatin'ny dimy taona ho avy. Ny orinasanay koa dia manafaingana ny famokarana sy ny fampiroboroboana ny fitaovana toy izany Mba hahatratra ny onja iraisampirenena sy hahatonga ny andian-tsarin'ny orinasa ho feno kokoa.
Ao anatin'ny fampidirana an'izao tontolo izao ankehitriny, ny firenena rehetra dia mifandray akaiky. Ny olan'ny tontolo iainana any amin'ny firenena tsirairay avy koa dia olan'ny tontolo iainana amin'ny zanak'olombelona rehetra. Ao amin'ny indostrian'ny fanodinana plastika, isika dia manana andraikitra sy adidy manamafy ny indostria fanodinana plastika sy ny fitantanana ny tontolo iainana an'ny olombelona. Amin'ny famokarana ny fitaovantsika manokana, fa koa ho an'ny tontolo iainana iray manontolo, andao hiatrika ho avy mahafinaritra sy madio isika.
Maniry ny vahoaka amin'ny firenena tsirairay aho hanana toerana honenana madio sy fiainana tsara sy tsara kokoa ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Fitomboana mahasalama, tsy mitebiteby.